संघर्षसील रण बहादुर,‘जो बाबा आमाको प्रेरणा र आफ्नै मेहेनतले निजामती भए’ – KarnaliPost Daily
संघर्षसील रण बहादुर,‘जो बाबा आमाको प्रेरणा र आफ्नै मेहेनतले निजामती भए’
१४ मंसिर २०७८, मंगलवार ११:५९ December 7, 2021 by Karnali Post Daily
हरेक व्यक्ति पिच्छे आ–आफ्नै भोगाई, जीवन संघर्ष, लक्ष्य, फरक किसिमका हुन्छन् । ती मध्य एक संघर्षशील व्यक्ति हुन हिमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रणबहादुर बुढा । सामान्य पारिवारिक अबस्थामा जन्मेका बुढा अभाव,संघर्ष झेल्दै,शिक्षण पेसा गर्दै वडा सचिव हुदैं हाल सरकारको उच्च ओहोदा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सम्म पुगेका छन् । यसै बीच प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रण बहादुर बुढाको थप जीवन संघर्षका विषयमा कर्णाली पोष्ट दैनिकका कार्यकारी सम्पादक सागर परियारले गरेको कुराकानीको सार ः
आजभोलीको दैनिकी कसरी बित्दै छन् ?
आजभोलीको दैनिक अधिकांश समय कार्यालयकै कामकाजमै बित्ने गरेको छ । दैनिक कार्यालयमा विभिन्न काम लिएर सेवा ग्राहि आउने गरेका छन् । जेष्ठ नागरिक फरक क्षामताका सेवा गा्रहीलाई प्रथामिकता दिने,विकास निर्माण योजना अनुगमन,दैनिक छलफल बैठक जस्ता नियमित कामकाज गरेरै दैनिकी बित्ने गरेको छ ।
बाल्यवस्थामा कसरी बित्यो ?
बाल्यवस्था भन्नुहुन्छ भने,संषर्घ,अभाव थुप्रै झेलियो । तिला गाउँपालिका ५ चुलाकोटमा २०३४ साल माघ १० आमा लाली बुढाको कोखबाट जन्म लिए । म सानोमा छदाखेरी धेरैनै चलाख थिए । घरमा आमा बुबा पढेलेखेको थिएनन् । तर बा आमालाई पढाउनु पर्छ भन्ने सोच थियो । बुबा आमा कृषिनै गर्थे । म दिउसो स्कुल जाने र विहान बेलुका कृषिमा सघाउने गर्थे । भने मल पनि बोकियो, भेडा चराउन जान्थे । त्यतिबेला सोलार बत्ती पनि थिएन् । झरो बालेर पनि पढ्थे । यसरीनै संघर्ष गरेर मैले २०५१ सालमा एसएलसी पास गरे ।
समग्रमा बाल्यवस्था संघर्षका साथ बित्यो । “दिउँसो स्कुल जाने र विहान बेलुका कृषिमा सघाउने गर्थे । कहिले मल पनि बोकियो, भेडा चराउन गइयो । घरमा बत्ती हुन्थेन्,सिकाउने मान्छे थिएनन् र पनि बा आमाको उत्प्ररेणा र आफ्नै मेहनतले सरकारी जागिर खाने लक्ष्य पुरा गरेरै छाडे ।”
लक्ष्य बिनाको मान्छे र गन्तव्य बिनाको यात्री कोही पनि हुदैन् । तपाईको पनि लक्ष्य अबश्य थियो होला । मेरो पनि लक्ष्य थियो । म सानैदेखि पढाईमा पनि तेज थिए,चलाख पनि थिए । साहेत अभाव संघर्ष सबै बुझेर होला । मैले एसएलसी २०५१ सालमा पास गरीसकेपछि जसरी पनि सरकारी जागिर खानु पर्छ भन्ने लक्ष्य बोकेको थिए । पारिवारिक अबस्था भने कमजोर थियो । मन पढ्ने जोश भने बलियो थियो ।
आयस्रोतको माध्यम भनेकै कृषि थियो । तर २०५५ सालमा जनजागृती प्रथामिक विद्यालय चुलाकोटमा प्राधानाध्यापक भएर काम गरे । त्यसपछि २०५६ सालमा रत्नचुडेश्वर उच्च माविमा व्यवस्थापन शंकाय विषयमा इन्टर पास गरे । बजारमा त्यतिबेला कोठा भाडामा लिएर पढ्ने चलन थिएन् । जसको घरमा बस्यो त्यहि घरमा काम गर्ने पढ्ने गरिन्थ्यो । सडक बत्ती केहि थिएन । दिनमा दाउरा झरो ल्याउने जाने पनि गरिन्थ्यो ।
इन्टर पास गरिसकेपनि मेरो मस्तिष्कटबाट सरकारी जागिर खाने भुत हटेको थिएन् । किन की इन्टर पढ्दै तयारी गर्दै गरेको थिए । सरकारी जागिर नै खाने दृढ संकल्पका साथ संघर्ष गरेकोले २०५९ सालमा मैले खरिदारमा नाम निकालेर कालिकोटका दुर्गम गाविस ओदान,मुर्मा लगायत ३ वटा गाविसमा काम गरे । मेरो सरकारी जागिरको यात्रा विकट कालिकोटबाट शुरु भयो ।
२०६२ सालमा म जुम्लामा सरुवा भए । त्यतिबेला देपालगाउँ,कुडारी रारा लिही गाविस हुदै कालीकाखेतु पटमारा गाविसमा काम गरे । २०६९ सालमा म नायब सुब्बामा बढुवा भएको हुँ । संघियता आउनु निरन्तर समाज सेवामै जुटिरहे । २०७४ पछि देशमा संघियता कार्यान्वयन आएपछि २०७६ सालमा अधिकृत छैटौ भएर नियुक्ती भए । २०७७ फागुन २३ गतेको संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णय अनुसार निमित्त प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत जिम्मेवारी दिए अनुसार काम गरिरेको छु ।
समग्रमा भन्दा जीवनको लक्ष्य अनुसार निरन्तर संघर्ष गरेर त्याग गरेर अभाव झेलेर मैले सरकारी क्षेत्रमा प्रबेश गरे । मेरो मेहनत सबैको साथ सहयोग मायाले आज यहाँ सम्म पुगेको छु । साथै २०७५ सालमा मैले ब्याचुलर पास गरे ।
जागिरे जीवनको अविस्मरणीय पल केहि छ ?
ठयाक्कै सम्झाउनु भयो । भन्दा आफ्नो प्रशंसा गरे जस्तो होला । मैले मेरो जागिरे जीवनमा नागरिकको सेवामा कहिले ढिलासुस्ती गरिन् । अहिले पनि सबै काम सकेजती छिटो छरितोनै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अविस्मरणीय पल भन्नुभयो,रारा लिही गाविसमा वडा सचिवका रुपमा काम गर्दा राराको बत्तीलाइ सुधार गरे । त्यतिबेला कोहि नबनाउ कोहि बनाउ भन्थे ।
तर मैले आम जनताको सेवाका लागि नेतृत्व लिएर ढलेका पोल ठडयाइयो,तार हालियो । त्यतिबेलाको १८ लाख सम्म खर्चेर बत्ती बाल्न सफल भए । तर उपलब्धी के लाग्छ, त्यो बत्ती अहिले सम्म पनि जस्ताको त्यस्तै बलीरहेको छ । साहेत त्यो बत्तीको कुरा उठ्दा रारा लिहीका हरेक मान्छेले मलाई सम्झीन्छन् होला भन्ने लाग्छ । मेरो जागिरे जीवनको एक सुखद अविस्मरणीय तथा उपलब्धी ठान्छु ।
मेरो जीवनको उत्प्ररेणाको स्रोत भनेकै मेरा बुबा आमा हुनुहुन्छ । भने, घरको आयस्रोत थिएन् । बा आमाले कृषि गरेरै पढाउनु भयो । बुबा सामान्य साक्षर भएपनि छोराहरुलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच थियो । समग्र रुपमा मेरो उत्प्ररेणाका स्रोत बा आमा, शिक्षक भुपु नारायण मिश्र सर लगायत गाउँका साथीभाइ शुभ चिन्तकहरु उत्प्रेरणाका स्रोत हुन् ।
मेरो विवाह २०५४ सालमा भएको हो । त्यतिबेला माघि विबाह गर्ने चलन पनि ब्याप्त थियो । तर मेरो भागी विबाह (लभ म्यारीज भयो । अहिलेको जस्तो फोनको जवाना थिएन् । त्यतिबेलाको चलन चल्ती अनुसार गोठ खेल्न जाने चलन थियो । भेटघाट बढी गरिन्थ्यो । मैले पहिलानै मन पराएकोले प्रस्ताव राखेको थिए । तिला ५ खोलीगाउँबाट मन पराएकै मान्छे संग विबाह भयो ।
बाल्यवस्थाको सम्झिने पल केहि छ ?
बाल्यवस्थामा सामान्य रमाइलो धेरै भयो । तर त्यसमा पनि सबैभन्दा रमाइलो पल भनेकै साथीहरु मिलेर काख्रा चोर्न जान्थेउ । साथै दुखद पल भनेको कालिकोटमा शुरुमा सिफारिस भएपछि त्यतिबेलाको सरकार र द्धन्द्धरत पक्षबाट मैले ठुलो दुख पाए ।
आगामी लक्ष्य के छ ?
मेरो आगामी लक्ष्य कुनै ठुलो छैन् । किन भने जागिरे जीवनमा मेरो सेवा प्रवाहबाट कुनै नागरिक असन्ुतष्ट रहेको पाएको छैन् । म पदमा कार्यरत रहँदा सरकारले दिएको जिम्मेवारी कुशलता पुर्वक पुरा गर्ने संकल्प छ । आगामी लक्ष्य रिटायर जीवनपछि राजनीति गर्ने,यसो उसो गर्ने ठुलो कुनै आकाक्षा छैन् । विशुद्ध पारिवारिक वाताबरणमा बस्ने र समाज सेवा गर्ने नै लक्ष्य छ ।
Posted in लेख/विचार, शिक्षा
धिताल परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत बन्यो भैसीपालन माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तेस्रो लहरको कोभिड रोकथाम पूर्वतयारीमा जुटौँ राजनीतिक भेला पनि बन्द गर एमबिबिएस शुभारम्भ गर्न राष्ट्रपति भण्डारी जुम्लामा